KUSEGAZINI UKUSEBENZELA UMPHAKATHI – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Jun 10, 2020 267
UMnuz Menzi Bhengu ngenkathi enikela ngezijumbana zokudla emphakathini
“UMAMA wangifundisa ukuthi ngingajabuli uma omunye umuntu esosizini kodwa ngibe isixazululo enkingeni abhekene nayo,” lawa amazwi ensizwa esencane yaseMzinyathi enyakatho neTheku uMnuz Menzi Bhengu.
UMnuz Bhengu (30) uthi uthando lwakhe lokusebenzela umphakathi lwaqala mhla eqaphelisisa ukuthi umuntu wesifazane ayehlekisana naye owayephuma ekhaya elihlwempu wayenzelwa uyena izinto eziningi okubalwa nezinto zokugcoba. “Lento yangihlupha kakhulu enhliziyweni yami ukucabanga ukuthi baningi abantu bezifazane abaphila lesimo. Ngafikelwa umqondo wokuthi ngiqale uhlelo lokuthengela abafana namantombazane izinto zokugcoba namaqabelo, nensipho kanye nezinye izinto ezincane ezidingwa abantu abasakhulayo ukuze bahlanzeke,” kusho uMnuz Bhengu.
Lokhu wayekwenza ekhipha ephaketheni lakhe njengoba wayesasebenza ngalesosikhathi. Wagcina esethatha isinqumo sokuthi asize nabanye abantu ngaphandle kwentsha kuphela. “Bengiye ngisize lapho kunesidingo khona uma abantu bengifonela becela usizo lokudla noma ngabe yini enginamandla okuyenza bengiyenza. Ngiwumuntu onozwela kakhulu kanti angithandi ukubona omunye umuntu esenkingeni. Engikwenzayo kusuka othandweni kanye nasezimfundisweni zikamama,” kusho uMnuz Bhengu.
Ukusebenzela umphakathi wangakubo selokhu akuqala ngonyaka wezi 2014, nokuthe lapho ephelelwa umsebenzi ngonyaka odlule waqhubeka esizwa osomabhizinisi basendaweni ukufeza umsebenzi abese ewuqalile. “Bekuba lula ngisasebenza ngoba bengithatha kwenginakho kodwa manje sekunzima ngoba angisakwazi ukwenza into ngokushesha ngoba kumele ngicele uxhaso kosomabhizinisi nokuthatha isikhathi,” Kusho uMnuz Bhengu.
Nakuba kumthathe iminyaka, ugcine esebhalisa ngokusemthethweni inhlangano yakhe engenzi nzuzo iMenzi Bhengu Foundation nathi uzoyithula ngokusemthethweni ngoSepthemba nonyaka. “Ukusebenzela umphakathi akuyona into elula. Kuke kwaba nezikhathi lapho ngithukwa khona, ngigxekwa ngilala ngikhala ngize ngifise ngisho ukuyeka, kodwa ekhaya bangigquguquzela ukuthi ngingayeki. Kuyisifiso sami ukubona lenhlangano isimama isiza abantu abaningi kuzwelonke. Ngifisa kube inhlangano efinyelela lapho uhulumeni engafinyeleli khona,” kuqhuba uMnuz Bhengu.
Njengamanje usabhalisele uxhaso lukamasipala weTheku lapho kuxhaswa khona izinhlangano ezingenzi nzuzo, oluzovalwa ngo July nonyaka lwe Grant-In Aid. “Nginethemba lokuthi uxhaso engingaluthola lungenza omkhulu umehluko emphakathini,” kusho uMnuz Bhengu.
Eqhuba uthe ukubambisana kosomabhizinisi nezinhlangano ezingenzinzuzo kungasiza kakhulu emphakathini. Ukhuthaze intsha ukuba isukume izimele isebenzise wonke amathuba enikwa wona. Ngiyazi kunzima esikhathini samanje ukuthola imisebenzi kanye nokusiza abantu ungalindele lutho kodwa uma kukhona ongakwenzela omunye umuntu, kwenze ungabheki ukuthi yena uzokwenzelani.”